सामान बोक्ने कन्टेनरमा लुकेर वीरगञ्ज आएका ५२ जना पक्राउ, १० घण्टादेखि कन्टेनरमै ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / समाचार / सामान बोक्ने कन्टेनरमा लुकेर वीरगञ्ज आएका ५२ जना पक्राउ, १० घण्टादेखि कन्टेनरमै !
सामान बोक्ने कन्टेनरमा लुकेर वीरगञ्ज आएका ५२ जना पक्राउ, १० घण्टादेखि कन्टेनरमै !
By Digital Khabar on १२ चैत्र २०७६, बुधबार १२:२०
१२ चैत, वीरगञ्ज । कन्टेनरमा लुकेर वीरगञ्ज आएका ५२ जना पक्राउ । सामान बोक्ने कन्टेनरभित्र लुकेर काठमाडौंबाट वीरगञ्ज आइपुगेका ५२ जना यात्रुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई मंगलबार मध्यराति वीरगञ्जको घण्टाघरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
उनीहरु लकडाउन उल्लंघन गर्दै काठमाडौंबाट चितवनको भरतपुर, हेटौंडा हुँदै वीरगञ्ज आइपुगेका थिए ।
काठमाडौंमा सामान छाडेर वीरगञ्ज फर्किँदै गरेको ना ५ ख ९५५२ नम्बरको कन्टेनरमा मानिसहरु चढेका थिए ।
उनीहरुले कन्टेनर चालकलाई २–२ सय रुपैयाँ भाडा दिएको बताएका छन् । मंगलबार मध्यराती वीरगञ्जको घण्टाघरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त कन्टेनरमा काठमाडौं, चितवनको भरतपुर, हेटौंडा हुँदै वीरगञ्ज आइपुगेका थियो ।
त्यस्तैगरी लक डाउनको पहिलो दिन वीरगञ्जमा लकडाउन अवज्ञा गर्ने २९ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई ५/५ सय रुपैया जरिवाना तिराएर साझमात्र छाडिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले बताउनु भयो ।
पहिलो दिन वीरगञ्जमा लकडाउन अवज्ञा गर्ने करिब २ सय जनालाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराएर छाडिएको उहाँले बताउनु भयो । दोश्रो दिन भने लकडाउनलाई पहिलो दिनभन्दा कडा पारिएकाले वीरगञ्ज बजार सुनसान देखिएको छ । बुधबार बिहान १० बजेसम्म उनीहरुलाई प्रहरीले छाडेको छैन ।
Related ItemsBirjungDigital KhabarLockdownNepal
← Previous Story पाल्पामा निषेधाज्ञा जारी
Next Story → सरकराले सीमामा अड्किएका नेपालीलाई स्वदेश भित्रने अन्तिम मौका, क्वारेन्टाइन अनिवार्य